Ukupheka kwezitsha ezivela izithelo zangaphandle
Ukhathele ama-apula? Ingabe ufuna okuthile kwangempela futhi okusha? Khona-ke izithelo ezingavamile yilokho okudingayo. Bagcwalisa ikhishi lakho ngama-flavour angavamile, futhi baphinde bahlukanise ukudla kwakho kwansuku zonke.
Ngaphezu kwalokho, zinezinto eziningi eziwusizo. Isibonelo, i-mango inezinyathelo ezinamandla zokuvimbela ukucindezeleka futhi i-tonic enamandla, kodwa i-malocaloric. I-Papaya inezindawo ezifanayo. I-lime ingashintsha i-lemons evamile noma ama-oranges, ngaphandle kwalokho, iqoqa zonke izimfanelo eziyigugu ezitholakala ku-citrus.
Ubisi nesithelo se-muesli
Ukuze ulungise le dish uzodinga: imango, 2 amapheya, 150 amagremu of cornflakes, 100 amagremu of fat-free cottage ushizi, isigamu ilitha ubisi, eyodwa isipuni of ikhasi lemon, ushukela kanye vanillin ukunambitha.
Mango uhlanza ikhasi bese ususa itshe. Inyama yegesi ku-grater enkulu. Amapheya abuye aqede ikhasi bese asusa ingqikithi. Sika ama-cubes eliphakathi kwe-cubes. Ukuxuba izithelo futhi ubeke endaweni esiqandisini ngesigamu sehora. I-cottage shizi uhlanganise ngokucophelela noshukela ne-vanillin. Faka i-lemon ngaphakathi kuyo bese uhlangana futhi. Izithelo zisakaze zibe ngamacwecwe, zibheke phezulu nge-cottage shizi bese zifafaza ngamacembe. Thela isidlo ngobisi. Ibhulakufesi elimnandi lilungele!
Ukuze ulungiselelwe i-sorbet, thatha izithako ezilandelayo: imango eyodwa evuthiwe, i-100gram ye-currant emnyama, i-strawberry, okusajingijolo noma i-sitrobheli, i-banana, ezimbalwa wezipuni zoju.
Ukuhlanza iMango kusuka ebantwaneni, ususe ithambo kuwo bese uthathe iziqephu. Bese uxubanise nama-berries omnyama bese ufaka efrijini cishe imizuzu engamashumi amane. Uma amajikijolo ehlwitha kancane, unqume ibhanana bese uwaxuba nobusika be-jagodemia ku-blender. Qedela i-sherbet ku-kremankam. Dessert ukuhlobisa amajikijolo nge strawberries fresh, raspberries noma strawberries.
I-Energy cocktail ye-kiwi ne-mango
Ukuze ulungise i-cocktail, thatha: i-mango eyodwa evuthiwe, i-kiwi ye-kiwi, ingilazi ye-yogurt engenamafutha, ingxenye yengilazi yamanzi e-orange, i-ice-cubes, i-sprig ye-mint fresh.
I-Mangoo ihlanza kusukela ebusweni, isuse ithambo ithole izicucu ezinkulu. I-peel kanye ne-peel kiwi. Izithelo zishaya kanye nomxube ukuze zenze ubukhulu obukhulu. Bese wengeza i-yoghurt, ijusi le-orange, iqhwa isithelo bese uhlanganise konke ngokuphindaphindiwe. Isiphuzo sesilungile! Zithulule zibe izindebe eziphakeme futhi uhlobise ngamagatsha omuthi omusha.
I-muesli ne-papaya kanye ne-yoghurt ehlutshiwe
Ukuze ulungise le dish uzodinga: 200 amagremu wepoppppp, isipuni esisodwa sekhasi lemon, izibini ezimbili zezipuni uju, ingilazi ye-yogurt ephansi, ama-parastolic spoons we-muesli, ama-tablespoons amathathu ama-cornflakes.
Ngemuva kwesihlungo esincane, sula umgqomo we-papaya, uxube nge-lemon noju. I-yogurt ixubane nomxube kuze kufinyelele emafenini obukhulu obukhuni, yibeke endaweni yokugcoba bese ufafaza uketshezi nama-flakes. Phezulu ngenhlanganisela yama-papaya noju. Uma ufisa, ungafafaza phezulu nge-coconut shavings noma isinamoni. Ukudla kwasekuseni kulungile!
Ukuze ulungise isaladi enemibala eminingi, uzodinga izithako ezilandelayo: i-papaya eyodwa, i-pepper eyodwa, ikhukhamba eyodwa, ama-150 amagremu ama-leeks, i-tomate, ama-gram angu-100 e-artichoke yaseJerusalema, i-parsley, i-soy sauce nosawoti ukunambitha.
Vseoboshchi hlambulula kahle. Pepper ikhasi kusuka imbewu bese uthathe imichilo, utamatisi, amakhekhe kanye ikhukhamba uthathe tincetu. Gweba i-papaya kusuka ehlathini kanye nembewu, uthathe ama-cubes of size medium. Zonke izithako zifakwa esitsheni sesaladi bese uhlangana nemifino. I-Topinambour grate ku-grater enkulu bese ufaka esaladini. Ngaphambi kokukhonza, inkathi nge imayonnaise futhi uhlobise ngamagatsha wemifino emisha.
I-Papaya ku-jelly yobisi
Ukulungiselela okudingayo: amagremu angama 400 amagqabha e-papaya, 300 ml ubisi, amaqanda ama-4 amhlophe, ama-gramu angu-10 e-gelatin, amathisipuni amabili ashukela, i-vanillin ne-sinamon bite.
I-Gelatin igcobe ingilazi yobisi olufudumele imizuzu engaba ngu-10. Hlanganisa ubisi obusele namaprotheni one-mixer, bese ufaka ingxube emlilweni ophansi futhi upheke kuze kube yilapho ubhebhezela, uvuselele ngaso sonke isikhathi. Khona-ke ngobuningi be-gelatinous, engeza i-vanillin bese uyibuyisela ibe ingxube ebilisayo. Pheka imizuzu embalwa kuze kube yilapho i-gelatin ichitheka ngokuphelele. Thatha umlilo. Nge-mixer, shaya umgqomo we-papaya noshukela kuze kube bushelelezi. Hlanganisa ingxube ne-jelly ubisi lweqanda bese uwusakaza phezu kwesikhunta. Beka i-jelly esiqandisini kuze kuqinisekiswe ngokuphelele. Ngaphambi kokukhonza, ukuhlobisa nge-mnti nezinsalela ezintsha zebhanana.
Kumele udinga isaladi: i-lime eyodwa, ama-gramu angu-400 weklabishi elibomvu, amagremu ayi-100 anyanisi nesithombo, ama-kiwi amathathu amakhulu, i-clove yama-garlic, ama-gramu angu-30 ama-peanut nama-tablespoons amabili amafutha omnqumo.
Kapustumelko chop kanye kancane yayo. Bese usika isithombo sibe yizicucu, usike u-anyanisi ohlaza bese uhlangana neklabishi. Ngokwehlukana, gubungula umquba we-lime ngesithelo se-kiwi uhlanganise nabo ngemifino enqunyiwe. Nikeza i-nastoyatsya encane bese ufaka emanzini ase-salad ngegalikhi. Ngaphambi kokukhonza, hlanganisa konke kahle futhi uzinike ngamafutha omnqumo. Ukusuka ngenhla ungafafaza ama-herbs: thyme, basil noma i-rosemary.
Ukuze ulungiselele i-dessert uzodinga: i-lime eyodwa, ama-gramu angu-200 we-chinanini, i-nectarine eyodwa, i-grapefruit eyodwa, i-pear of pears eqinile, i-pomegranate eyodwa kanye noshukela ukunambitha.
Cindezela ngaphandle kwekhayimu. I-Zedra grate, uthele ushukela uthele amanzi ayi-100 ml. Pheka ukushisa okuphansi imizuzu engu-10, kuze kube yilapho ushukela uhlakazeka.Isiphuzi se-Gotovy siphunga, bese uthele isitsha se-saladi, engeza ijusi lama-lime. Gweba izithelo ezisuka emgodleni bese uwasika zibe yimichilo. Zonke izithelo zifakwa esitsheni sesaladi bese uhlanganise kahle ngesiraphu. Ngaphambi kokukhonza, vumela isaladi ukuphuza okwesikhashana noma emashumi amathathu.
Ukuze ulungiselele, uzodinga: 2 kiwi, 50 amagremu ama-raspberries, ama-gramu angu-150 e-yogurt aphansi-fat, amagremu angu-100 kakolweni ahlwanyelwe ne-vanillin.
Thela ukolweni ohlume no-vanillin. Ngokuhlukile, hlanganisa i-ananas, uthathe ama-cubes nge-yogurt. I-Kiwi ihlanzekile futhi ibuye ibe yi-cubes. Hlanganisa nge smaline. Eklasini elide, uthele i-yoghurt nge-ananas, engeza ukolweni ombalwa kuwo, bese ugcwalisa konke okunye ngejusi yezithelo kusuka kuma-raspberries kanye ne-kiwi. Bon appetit!
I-shrimp ehlanziwe kanye ne-kiwi isaladi
Ukuze ulungise le saladi uzodinga: 4 kiwi, uhhafu we-kilo wezinhlanzi, 2 utamatisi, i-melon eyodwa encane, ama-gramu angu-150 e-yogurt aphansi-fat, i-dill, i-lemon, usawoti kanye ne-pepper ukunambitha.
Gweba ama-peas bese uwasika ndawonye utamatisi. Susa ama-melon ku-melon bese wenza isidlo. I-melon melon yenziwe ngamacube futhi yengeze i-kiwi no-utamatisi. Ingxube yemifino kanye nemifino igcwalisa ama-half of melon. Imfucumfucu ibamba ngamanzi amunyu kancane bese uwahlanza. Bese ubeka phezu kwezithelo nezitshalo zemifino. Hlanganisa ngokwehlukana i-yoghurt yemvelo, oluhlaza oqoshiwe nezinongo. Thela ingxube elandelwayo ye-ulethisi. Ukuhlobisa isidlo nge dolcamilimon kanye ne-dill sprigs. Bon appetit!
Lena yingxenye encane yezokupheka zezithelo zabo ezingavamile. Izitsha eziningi ezifanayo zingatholakala kwi-intanethi noma ziphekwe ngombono wakho. Ungesabi ukuzama futhi ukumangala izihlobo zakho ngezidlo ezihlukahlukene.
Kungakanani isikhathi nendlela yokupheka i-semolina ipharali ebisi namanzi: zokupheka ngezinyathelo ngezinyathelo namavidiyo namavidiyo
Kungakanani ukupheka yenkomo?
Izitsha Zonyaka Omusha - isaladi "Inyoka"
Isaladi elihlwabusayo kakhulu ngezinkuni zesikhumba emaminithini angu-5, zokupheka nezithombe
Ungadliwa izitsha zokudla ezidliwayo zeholidi
Ukupheka okulula kwama-saladi wetafula lokugubha
I-Plum pie ephephandabeni ethi "i-New York Times"
Nini ukushada ngo-2013
Ingulube ithembisa kuhhavini
Incazelo ephelele yomqondo wama-antioxidants
I-Horoscope ye-Gemini-Abesifazane ngoMashi 2017
I-Jelly kusuka ku-currant emnyama
I-Taurus, i-horoscope yenyanga kaDisemba
Ingabe i-grapefruit ingxube yezithelo?
Izimbiza neklabishi, amazambane nezinkukhu
I-rally best for a friend
Ama-champignon aphekwe ushizi